Ulungelelwano lwezinto eziphilayo?
Ulungelelwano lubaluleke kakhulu kwisixhobo sokubala. Le ndlela kwimibare ingasinceda ukuba sinqume kwaye sichaze ubudlelwane phakathi kwezinto ezimbini. Nangona kunjalo, kufuneka siqaphele ukusebenzisa nokutolika ngokuchanekileyo. Esinye isilumkiso sisoloko sikhumbule ukuba ukulungisana akubhekiseli kwimeko . Kukho ezinye iinkalo zokulungelelanisa okumele sizinyamekele ngazo. Xa sisebenzisana nokulungelelanisa kufuneka sihlale silumkele ukulungelelaniswa kwemvelo.
Ukulungelelaniswa kwezinto eziphilayo kulungelelaniso olusekelwe kwimilinganiselo . Nangona oku kunokuba luncedo, kwaye ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukuqwalasela, kufuneka siqaphele ukuba singacingi ukuba olu hlobo lolungiso lusebenza kubantu ngabanye.
Siza kubonisa umxholo wokulungelelaniswa kwezinto eziphilayo, kwaye uxinzelele ukuba kungasetyenziswa kakubi, ngokujonga imizekelo embalwa. Umzekelo wokulungelelaniswa kwemvelo phakathi kwezinto ezimbini eziguquguqukayo yimiba yeminyaka yemfundo kunye nemyingeniso ephakathi. Siyabona ukuba ezi zimbini ziguquguqukayo zichanekile kakhulu: ziphakame inani leminyaka lemfundo, inqanaba eliphezulu lemali engenayo. Nangona kunjalo, kuya kuba yimpazamo ukucinga ukuba olu lungiso luba nemali yomntu ngamnye.
Xa sicinga abantu ngabanqanaba elifanayo lemfundo, amanqanaba engeniso ayasasazeka. Ukuba sasiza kutshabalalisa le nkcukacha, siza kubona ukusabalala kwamaphuzu.
Isiphumo siya kuba ukuba ukulungisana phakathi kwemfundo kunye nemali engenayo yodwa kuya kubuthakathaka kunokuba kulungelelaniswe phakathi kweminyaka yemfundo kunye nemali engenayo.
Omnye umzekelo wokulungelelaniswa kwezinto eziphilayo esiza kuziqwalasela malunga neendlela zokuvota kunye nenqanaba lokufumana imali. Kwinqanaba likaRhulumente, amazwe amaninzi avota ukuvota kwinani eliphezulu kubaviwa beDemocratic.
Abampofu bavota ngamazinga aphezulu kubaviwa beRiphabhlikhi. Kubantu ngabanye olu lungiso lushintsho. Inxalenye enkulu yabantu abampofu ivotela iDemocratic and portion portion of wealthy people voted Republican.
Umzekelo wesithathu wokulungelelaniswa kwemvelo xa sikhangelelanisa inani leeyure zovavanyo lwamaviki kunye nesilinganiselo somzimba womlinganiselo. Apha inani leeyure zokusebenzisa umzimba luyinto echazwayo kwaye i-index index mass mass is response. Njengoko umsebenzi ukhula, sinokulindela ukuba i-index mass mass is going. Ngoko ke siya kubona ukulungiswa okunamandla phakathi kwezi ziguquko. Nangona kunjalo, xa sibheka kwinqanaba ngalinye ukulungiswa akuyi kuba namandla.
Ulungelelaniso lwezinto eziphilayo luhambelana nokudalwa kwezinto eziphilayo kunye nomnye umzekelo wolu hlobo lobubi. Olu hlobo lweengqiqo ezinengqiqo lithatha ukuba isitatimende samanani esichaphazelekayo sisebenza nakwabantu ngabanye ngaphakathi kweli qela. Le yindlela yokwahlukana, apho kukho iingxelo eziphosakeleyo ezibandakanya amaqela abantu ngabanye.
Enye indlela iimeko eziphilayo ezibonakalayo kwiinkcukacha ziyi- Simpson's paradox . Isicatshulwa sikaSimpson sithetha ngokuthelekiswa phakathi kwabantu ababini okanye abantu.
Siza kwahlula phakathi kwezi zimbini nge-A ne-B. Uluhlu lweemilinganiselo zingabonisa ukuba uguquko luhlala lunexabiso eliphezulu kwi-A kunoko-B. Kodwa xa silinganisa ubuncinane beliguquguquko, sibona ukuba uB mkhulu kune-A.
Ixesha lezendalo lidibene ne-ecology. Ukusetyenziswa kwelinye kwexesha lokuphila kwintlalo kukubhekisela kwisebe ethile ye-biology. Le nxalenye ye-biology ihlola ukusebenzisana phakathi kwezinto eziphilayo kunye nokusingqongileyo. Oku kuqwalaselwa komntu njengenxalenye yento enkulu enkulu kunengqondo Kulolu hlobo lolungelelwano luthiwa.
7 Iinkqubo ezilula zokufundisa iMathe kubantwana
Yintoni iGrafu yeBhara?
Ukusebenzisa Iimpazamo zeMatriki zokuFunda
Iyiphi Inombolo Yangempela?
Yintoni Ubuninzi beenkcukacha?
Iimpawu eziMagical Multiplication Tricks zokufundisa abantwana ukuba bafunde
KURT Umsebenzi weKurtosis kwi-Excel
Indlela yokusebenzisa i-Semicolon ngesiSpanish
Indlela yokubala ubungakanani beGesi
'Oumuamua: Ummangaleli ukususela ngaphaya kweNkqubo yeSolar
Funda indlela yokudibanisa neepenciloni ezinemibala
Ngubani Owehlayo I-Viagra?
Indlela yokuxelela ukuba iFayile ikhona ePerl
Indlela yokudlala ukuKhusela okuKhuselekileyo kwiBhola ibhola
Iimifanekiso eziPhambili ze-Action 10 ze-Decade!
Iindlela ezili-6 zokunceda abafundi beFot News News
Ukholo: Intlekele yezobuNtu
AbaDumi be-10 abaDumi
Indlela yokwenza i-Splint ephuculwayo
Ukufumana Iinjongo eziphambili Izimpendulo 2
Ukuchaneka kusetyenziswe kwiNtetho kunye nokuBumba
Hlola iifom ze-Lakshmi ezi-8
I-AU - isiFrentshi esichazwa nge-AU
I-Biography ye-Le Corbusier, iNkokeli yeStay International
Ukunyamezela kunye nezigulane
ICopia (iRhetoric neSt Style)
Iphrofayili kunye nezoNkohlakalo zikaTeresa Lewis
Imbali emfutshane yeTable Tennis / Ping-Pong
I-10 Eyona Yona Yimfuneko YaseTranski